Stanolone (DHT) ntụ ntụ (521-18-6) Ndị na-emepụta & Ndị na-eweta ya - actorylọ ọrụ
Raw Stanolone (DHT) ntụ ntụ (521-18-6)
Androstanolone dị ka DHT dịka nke ọma. DHT na-etolite na testes, ntutu ntutu isi, oghere adrenal na prostate gland ma mepụta mgbe testosterone na enzyme na-emekọ ahụ. N'ime akpa nwa, DHT na-akwalite mmepe nke àgwà nwoke nke embrayo nwoke na nwa ebu n'afọ.
Azu uhie Raw Stanolone (DHT) (521-18-6) video
Raw Stanolone (DHT) ntụ ntụ (521-18-6) Nkọwa
Uzuzu Raw Stanolone (DHT) (INN: androstanolone) bụ ihe na-emepụta ọgwụ nke hormone testosterone, bụ nke a na-emepụta na prostate gland, testes, follicles ntutu, na gọọmenti adrenal 5-alpha-reductase site na ibelata mkpụrụ 4, 5 abụọ ejiri. Dihydrotestosterone sitere na klas nke ogige a na-akpọ androgens, nke a na-akpọkarị hormones na-etrogenic ma ọ bụ steroid, nke bụ steroid na hormone na-atụ egwu mmekọahụ. Ọ bụ agonist nke androgen receptor (AR). Ọ na-arụ ọrụ physiological dị mkpa n'ịdị iche iche nke mmekọahụ, ụda nke mkpịsị edemede na nchịkwa, ntutu isi, sebum na-emepụta na mmepe na mmezi nke gọọmenti prostate na seminal vesicles. A na-ejikarị ya eme ihe maka ọgwụgwọ nwoke na-agwọ ọrịa, androgen deficiency of illness, androgen deficiency of aging and microphallus at infancy.
Raw Stanolone (DHT) ntụ ntụ (521-18-6) Smmezi
Product Name Raw Stanolone (DHT) ntụ ntụ
Chemical Aha 5α-androstan-17β-ol-3-one solution,(5-alpha,17-
Klaasị ọgwụ ọjọọ Steroid; Intermediates & Fine Chemicals; Ndị ọgwụ; Ndị na-eme ihe na-akpata oyi na ọnyá; API
molekụla Fnhazi C19H30O2
molekụla Wasatọ 290.44
Nkịtị Monoisotopic 290.225 g / mol
Mgbu Point 178-183 ° C
Esi Point 372.52 Celsius C (ike siri ike)
Ọkara Ndụ nke Ndụ 8-9 awa
Sume Mmiri, 525 mg / ml (na 25 Celsius C)
Stanolone Antinye Eji maka ọrịa na-adịghị ala ala, ọrịa osteoporosis, ọrịa siri ike na trauma, ọkụ, wdg, na-akpata nsogbu nitrogen na-adịghị mma, na-akwalite uto nke ụmụ ọhụrụ na akaghi aka, wdg. Ọkpụkpụ adịghị mfe ịgwọ ọrịa, hypercholesterolemia na ịda mbà n'obi ezumike . Na Raw Stanolone ntụ ntụ nwere ike iji dị ka ọgwụ na ihe onwunwe.
Gịnị bụ ntụpọ Raw Stanolone (DHT) (521-18-6)?
Androstanolone, ma ọ bụ stanolone, nke a makwaara dị ka dihydrotestosterone (DHT) ma ree ya n'okpuru aha aha Andractim n'etiti ndị ọzọ, bụ ọgwụ na hormoni narogenic etrogen na anabolic (AAS) nke a na-eji mee ihe karịsịa n'ịgwọ ụkwara testosterone dị ala na ụmụ nwoke. A na-ejikwa ya agwọ ọrịa ara na obere amụ na ụmụ nwoke. A na-enye ya dị ka gel maka itinye aka na akpụkpọ ahụ, mana enwere ike iji ya dị ka ester site na ogwu ogbugba.
Kedu Raw Stanolone (DHT) ntụ ntụ (521-18-6) ọrụ
A na-eme ya site na mmekorita a nke 3-oxo-5-alpha-steroid-4-dehydrogenase. Dihydrotestosterone (DHT) sitere na 5 Alpha Mbelata testosterone. N'adịghị ka ụbụrụ na-ahụ maka ụbụrụ, DHT enweghị ike ịgbatị ya na estradiol n'ihi na ihe kpatara androstanolone bụ nke a maara dịka ezigbo steroid steroid. Dihydrotestosterone (DHT) ga - enweta ọgwụ metabolite nke na - ahụ maka hormone testosterone, bụ nke sitere na prostate gland, testes, follicles ntutu, na oghere adrenal site na 5-alpha-reductase natara site na ibelata mkpụrụ, 5double-bond. Dihydrotestosterone nwere nke a na-akpọ chemicals a na-akpọ androgens, nke a na-akpọkarị hormones androgenic ma ọ bụ testoids. A na-eche na DHT dịka ihe dị ka 30 ugboro karịa karịa testosterone n'ihi ntụgharị ụba na nnata na androgen.
Raw Stanolone (DHT) ntụ ntụ (521-18-6) Ụdị
A na-ere Stanolone n'ahịa anụ ọhịa nke ụfọdụ mba ma ọ bụ 20 ma ọ bụ 50 mg / ml. Ndị nwoke kwesịrị iji 200-400mg kwa izu, na injections dị naanị otu ugboro n'izu.
Ụmụ nwanyị nwere ike ịnwale nandrolones n'ihi ọdịdị ịdị nwayọọ ha na ọchịchọ ha dị ala. Ka o sina dị, ha ka dị ka androgenic, n'ihi ya, ọ bụghị karịa 50 igwe kwa izu ka a na-adụ ndị inyom ọdụ, ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-apụta, a ghaghị ịkwụsị iji laurabolin ozugbo.
Azu Raw Stanolone (DHT) (521-18-6) Na-eji
Androstanolone yiri nke dihydrotestosterone ahụ, bụ nke, dị ka anyị si mara, na-agbanwe site na ntọghata akụkụ nke testosterone. Ụfọdụ na-akpọ Androstanolone a sịntetik dihydrotestosterone. Androstanolone nwere mmetụta na-emekarị etrogenic na, n'ihi usoro ya, enweghị ike ịbanye n'ime estrogen. Maka ngwa ngwa ịmepụta ike na ike muscle Androstanolone abaghị uru.
Androstanolone ji bụrụ onye na-asọ asọmpi kachasị mmasị nke onye na-eme egwuregwu ka ọ na-enyere aka nweta ahụ ike karịa site na ụba abụba site na ịba ụba na-eme ka etrogen na-enweghị aromatizing. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eji Androstanolone n'oge mgbatị maka nkedo doping a nwalere ebe ọ bụ na ihe ahụ nọgidere n'ime ahụ maka obere oge na testosterone / epitestosterone uru adịghị emetụta ya. Uzo ozo di nma bu na onodu ajuju abughi imeju.
Zụrụ Stanolone (DHT) ntụ ntụ si Buyaas.com
1 nyochaa maka Raw Stanolone (DHT) ntụ ntụ (521-18-6)
Ngwaahịa STANOLONE (DHT) bara ezigbo uru.
Ụdị uzo Masseron Enanthate (Drostanolone) (472-61-1)
Ụrọ Methasteron (Superdrol) ntụ ntụ (3381-88-2)
Raw Drostanolone Propionate (Masteron Propionate) ntụ ntụ (521-12-0)